:Bọchị: Disemba 11, 2019
Nyefe nkwekọrịta afọ 2019 n'ime mkpesa nke Iwu Nke 4735: Ntinye aka nkwekọrịta ahụ ghọtara na Usoro nke 2019 nke Iwu 4735 na 4 dị ka ndị a: Newgbọ Ọgbọ Istanbul Ọhụrụ - Halkalı Miri Line Mwube [More ...]
Onye isi obodo Trabzon Murat Zorluoğlu mere ọtụtụ nleta ndị isi Trabzon Port. Onye isi ala Zorluoğlu zutere Onye isi ala Trabzon Port Operations Onye isi Temel Adıgüzel. Afọ ojuju ya na nleta ahụ [More ...]
N’ala anyị, ụzọ njem ụgbọ mmiri na oke osimiri esila rụọ ọrụ nke ọma site na mmụba dị ukwuu na mbupụ na mbubata. [More ...]
Njikọ nke ndị isi ala Marmara na Kocaeli Mayor Assoc. Dr. Tahir Büyükakın zutere ndị isi nke mpaghara Dagince. Derince Mayor Zeki Aygün, Secretary General nke Obodo isi Balamir Gündoğdu, ISU General [More ...]
Companylọ ọrụ Turkey bịara na nke kacha ọnụ ahịa nro maka ngụkọta maka CP S-01 nke Malolos Clark Railway Project na Philippines. Malolos Clark Rail soft na-enye ọnụ ala kacha ala na ihe dịka 160 nde USD [More ...]
Ngwa MobileSBİKE Ekwentị Ekwentị ọhụrụ: İSPARK, onye enyemaka nke Istanbul Metropolitan Obodo, megharịrị ngwa ekwentị nke İSBİKE, ọrụ ya na-etolite etolite. Ọ dị mfe ugbu a iji teknụzụ igwe eji ekwu igwe. Obodo Obodo Istanbul (IMM) [More ...]
Mahadum Abdullah Gül ga-akpọrọ ndị nkuzi; Asụsụ nkuzi bụ Bekee. Iwu agụmakwụkwọ dị elu Nke 2547, 657 No. Iwu Ohu Ndị Ọrụ 48. ọnọdụ ekwuru n’isiokwu ahụ, 2 General Staff na [More ...]
Mahadum Muğla Sıtkı Koçman ga-ewere ndị ọrụ agụmakwụkwọ; Muğla Sıtkı Koçman University Rectorate nke ọkwa ndị dị ugbu a 2547 ọnụ ọgụgụ Iwu, Ọmụmụ Ndị Mmụta Ọzụzụ na Usoro Iwu Ọchịchị na Muğla Sıtkı Koçman [More ...]
Mahadum Manisa Celal Bayar ga-ewe ndị ọrụ agụmakwụkwọ; Mahadum Manisa Celal Bayar Rectorate Rectorate nkeji, 2547 gụrụ Iwu Elu Ọzụzụ na Mmụta Ọmụmụ Ọzụzụ Ndị Mmụta na Usoro Nhọpụta yana usoro dị mkpa nke Manisa [More ...]